Wafdi Soomaali ah oo ku sugan Iran - BBC News Somali
Wafdi Soomaali ah oo ku sugan Iran
Wasiirka cadaaladda ee dalka Iran, Seyyed Morteza Bakhtiari ayaa sheegay in nidaamka cadaaladda ee dalka Iran oo ku salaysan aqoonta Islaamka ay diyaar u yihiin in khibradda wanaagsan ee laga helay wixii ka dambeeyay kacaanka Islaamiga ah loo gudbiyo dalka Soomaaliya si gacan looga siiyo in dalku uu u babac dhigo khuwadaha isla wayn ee faragalinta badan. Sidaas waxaa qoray bogga internet-ka muxaafidka ah ee gaarka loo leeyahay Fars News Agency.
Isagoo ka hadlayay kulan uu la qaatay afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya, Shariif Xassan Sheekh Aadan oo shalay ay ku kulmeen, ayaa Bakhtiari, waxaa uu sheegay in Iran ay document ku filan oo lagu kalsoonaan karo iyo cadaynba ay ka hayso dalal gaar ah oo faragalin ku haya Soomaaliya, taasoo loo gudbin karo caalamka.
Wuxuu intaas ku daray in kacaanka Islaamiga ah ee la dagaalamay isqaadqaadka adduunka in uu saraakiisha Soomaalida cashar siin karo, isagoo sheegay in dalka iyo dowladda Iran ay si xoog leh uga soo horjeedaan cadaadiska sidaa darteedna Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ay taageerayso dadka la caburiyo, ayna ku jirto dadaal ay uga soo horjeeddo caburinta adduunka oo dhan.
Wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa tagay dalka Iran maalintii Axadda si loo ballaariyo iskaashiga ay la leeyihiin Iran ee dhinacyo dhowr ah.
Iran ayaa sanadihii ugu dambeeyay sii kordhinaysay xiriirka iyo iskaashiga ay la samaynaysay dalalka Africa, iyadoo khibrad iyo technology-adba u gudbisay dhowr dal oo African ah, sida ay qortay wakaaladda wararka Fars ee Iran.
Waxaa warku intaa raaciyay in madaxwaynaha Iran Maxamuud Axmedinejad uu horay ugu eedeeyay khuwadaha gumaysi doonka ah iyo dhowr dal oo Islaam ah in ay ka dambeeyaan amni-darada iyo xasilooni la'aanta ka jirta Soomaaliya.